Calaamadda tooska ah ee jejebinta biriijka tooska ah ee tooska ah ee loo yaqaan 'VE502' koofiyadda iftiinka tooska ah
Calaamadda tooska ah ee jejebinta biriijka tooska ah ee tooska ah ee loo yaqaan 'VE502' oo ah koofiyad iftiin toos ah leh
Qalabka APP ee loo habeeyay iyo Android APP ayaa kor u qaadaya LED / COB Light bandhigay
Iftiinka iftiinka ku jira si loo sameeyo si loo sameeyo muuqaal hal-gabal ah.
Ku xir qalabka casriga leh Bluetooth si aad u gaarto shaqooyinka aad rabto
Isku dar astaamaha tikniyoolajiyada iyo badbaadada.
Cimilo-xireedka elektiroonigga oo buuxa.
Nooca alaabta Koofiyad caqli badan
Lambarka Moodalka Koofiyad casri ah VE502
Teknolojiyada LED + EPS + PC in-caaryada
Muuqaalka naqshadeynta hawo, hawo-mareeno xoog leh, madaxa raaxada ku habboon, qaabeynta moodada
Maaddaama aan khibrad ka badan 15 sano u leenahay koofiyadda R & D iyo soosaarka, koofiyadda caqliga leh ee isku dhafan IOS APP iyo Android APP iftiin leh si looga dhigo badbaado badbaado badan macaamiisha. Qaabka is haysta ee koofiyadda xariifka ahi wuxuu abuuraa qaab soo jiidasho leh. The-in-mold LED / COB wuxuu ku sifeeyay tiknoolajiyad gebi ahaanba cusub iyo rimid horumarsan. Koofiyadda xariifka ah ee lagu qalabeeyo APP, calaamadda caaryada ku jirta ee laydhka / xakamaynta COB iyo xakamaynta, saddexda qaybood ee ku xidhan buluugga lammaanaha buluugga ah, qaabaynta muujinta iyada oo loo marayo APP iyo leexashada nalka calaamadaha ee uu muujiyey controler oo ay ku jiraan laydhka biriijka.
Waxaan gacan-ku-qabsi ula shaqeynay kooxda R&D iyo tijaabinta jihooyinka kala duwan, waxaan aaminsanahay in koofiyadda caqliga badan ay tahay teknoolojiyada hogaamineysa ee loogu talagalay in lagu sameeyo koofiyad caqli gal ah heer cusub oo warshado caqli badan leh. Foomka madaxa ee ku habboon ayaa kor u qaadaya raaxada iyo awoodda qaboojinta oo leh suuf ballaaran oo daboolaya ayaa kaa dhigaya inaad ku raaxeysato inta lagu guda jiro maalin laga bilaabo safarkaaga subaxa ilaa aad la laasho saaxiibbadaada fiidkii. Koofiyadda casriga ah ee shahaadada CE, CPSC iyo nooca AUS ee ilaalinta saxda ah.
Nidaamkan taamku wuxuu leeyahay saddex meelood oo hagaajin toosan ah, wicitaan xarago leh si loogu hagaajiyo xiisadda hal gacan waxaana laga sameeyaa qalab jilicsan oo adkeysi leh si looga fogaado waxyeelo inta la xirayo. Nidaamka taam ah ee Fududeeyaha iyo beddelka ayaa bixiya hagaajinta saxda ah ee ku habboonaanta.
Hore: E Koofiyad mooto V10S
Koofiyad Casri ah oo ugu Fiican
Koofiyadda Mootada Casriga ah
Koofiyad Casri ah
Koofiyad Baaskiil Smart ah
Koofiyad Ski ah V01S
Koofiyad fuula fuula V10BS